Soosaaraha Dunida Hogaaminta ee Qalabka Dhismaha ee Deep Foundation. Annaguna waxaan nahay soo-saare mashiinno leh taariikh 100 sano leh.
贝博体育app网址Jaridda Xargaha & Dib-isugu-dhajinta Qalabka Darbiyada Dhaba
SEMW waxay dhistay nidaam suuq ku saleysan suuqa waxayna u hibeysan tahay aasaaska aasaaska.
贝博体育app网址SEMW waxay bixisaa "alaabo wax soo saar leh, koox xirfadlayaal ah, adeeg heer sare ah" iyo istiraatiijiyad guuleysta macaamiisheenna.
贝博体育app网址Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
贝博体育app网址Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh.